Manamafy ny minisiteran’ny Fitaterana: “Tsy hisy izany sidina avy any India, La Réunion,… izany” | NewsMada
Manamafy ny minisiteran’ny Fitaterana: “Tsy hisy izany sidina avy any India, La Réunion,… izany”
Par Taratra sur 28/04/2021
Niteraka resabe tany amin’ny tambajotra sosialy ny fahenoana fa mbola hisy sidina avy any India ho avy eto rahampitso alakamisy. Manamafy ny minisiteran’ny Fitaterana fa tsy misy mihitsy ny sidina mitondra mpandeha avy any India na La Réunion ho tonga eny Ivato, sy ny mankany ivelany.
Namoaka fanambarana ofisialy ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro (MTTM), omaly, mikasika ny sidina ana habakabaka iraisam-pirenena, mitatitra olona. Mampahafantatra ity minisitera ity fa diso tanteraka ny vaovao navoakan’ny fahitalavitra tsy miankina iray, nilaza fa “mbola hisy sidina ataon’ny Air France, handalo ao La Réunion avy any Azia, toa an’i India ka hitondra mpandeha ary higadona eny Ivato, ny alakamisy (29 avrily) ho avy izao…”. Manoloana izany, manamafy ny minisiteran’ny Fitaterana (MTTM), fa “tsy hisy sidina na avy any India, na avy any La Réunion, ho tonga eny Ivato ary tsy hisy sidina ihany koa hanainga eny Ivato, hihazo an’i India, na La Réunion, mandritra izao hamehana ara-pahasalamana izao”.
Atahorana tokoa ny aretina coronavirus, variant indianina, amin’izao fotoana izao. Manodidina ny 350.000 isan’andro ny tratry ny aretina, miisa 2.400 isan’andro ny maty any India, amin’izao fotoana izao, raha 3.000 ny matin’ny variant breziliana any Brezila.
Miandry valiny PCR vao mahazo mody
Tsiahivina fa nisy fiaramanidina Air France, nitondra mpandeha misa 280 avy any Frantsa, tonga teny Ivato, ny alatsinainy 26 avrily teo. Zotra manokana, efa nahazoan’ny masoivoho frantsay alalana tamin’ny fanjakana malagasy, ny 30 marsa, ity sidina ity. Nampahafantatra ny minisitry ny Fitaterana, Randriamandranto Joel, fa napetraka mihiboka any amin’ny hotely tsy miankina eto an-dRenivohitra ireo mpandeha ireo, ahitana Malagasy sy diplaomaty vahiny miasa eto Madagasikara. Hentitra ny fanaraha-maso azy ireo, tsy mahazo mivoaka ny efitrano hatoriany, mandritra ny fihibohany, mialoha ny hahazoana ny valin’ny fitiliana PCR azy ireo tsirairay, na dia efa natao ary tsy nahitana soritr’aretina aza izy ireo, mialoha ny niaingany tany Frantsa . Anaterana sakafo isaky ny efitrano, aterin’ny mpiasan’ny hotely, apetraka eo an-dalantsara, fa tsy mahazo mifandray mivantana amin’ny mpandeha tsirairay.